Kutenderera kwefekitori - Sinopulse Hose Factory Co., Ltd.
Sinopulse Hose Fekitori ine makore gumi nemashanu ekugadzira uye kutumira kunze ruzivo rwe hydraulic hose, hosipisi hosipa uye zvigadzirwa, yapfuura ISO 9 0 0 1 NEMSHA chitupa. Iyo Brand Sinopulse inotengeswa kune nyika zhinji pasirese.
Musangano wese unofukidza anopfuura makumi maviri emamirimita emamirimita, anosanganisira ane musangano wekusanganisa rabha, akapfava mandrill musangano, akaoma mandrill musangano, asiri-mandrill musangano, chivakwa chehofisi.
Kuti tirambe takatsiga mhando uye nemhando yepamusoro, isu tinotarisa pamidziyo, manejimendi uye mhando yekudzora mhando, kubva kune yakasvibirira zvinhu, inoenda nekupedzisa zvigadzirwa imba yekuchengetera, Nhanho yega inowirirana.
Mbishi zvinhu rabhoritari unoedza pane rabha jira kumahombekombe kuomarara, simbi waya tensile, kunamatira pakati perabha nesimbi waya, yerabha vulcanization munyonga.
Kune akatiwandei musangano weyuniti yekushandira akasiyana maitiro eanogadzira mutsara. Yekutanga, yakavhenganiswa rabha jira ne LG rabha uye yakakwira yekumhanya majoini muchina kugadzirira akabatana waya we hydraulic hose.
Isu takatora michina yemhando yepamusoro yekuruka uye yekumusoro kuti ive nechokwadi chekuti simbi waya yekusimbisa isina kubatana GERMANY MAYER HIGH SPEED BRAIDING MACHINE, ITALY VP MACHINE, HIGH SPEED SPIRAL MACHINE inoita kuti tikwanise yakakwira goho pasi otomatiki zera.
Iyo inotonhora yekudyisa extruding muchina extrude yemukati neyekunze rabha, iyo inogona kudzora yerabha hosi yemadziro ukobvu nenzira kwayo; Zvichakadaro, tinogona kugadzira mhando yemhando yekudhinda pane hosipaipi.
Mushure mekugadzirwa, iyo yese hosi ichaedzwa pasi peimwe poindi shanu nguva yekumanikidza kushanda.
Kunze kwezvo, batch yega yega inoedzwa kuputika kumanikidza uye kuedza kwekumanikidza. Izvo chete zvigadzirwa zvinogoneswa zvinotumirwa kumutengi.
Iwe unogamuchirwa noushamwari kuZVINONYANYA